Hatsarao ny sofina amin'ny AirPods amin'ny sofinao amin'ity fitaovana ity | Avy amin'ny mac aho
Mbola mitondra safidy vaovao hitanao tamina tranonkala izahay mba hiarovana ny AirPods sarobidy aminao amin'ny fatiantoka na fianjerana. Araka ny efa fantatrao, misy mpampiasa maro izay tsy faly amin'ny Apple satria tokana ny haben'ny AirPods. ary misy olona sasany manondro fa tsy mijanona tsara ao an-tsofiny izy ireo.
Etsy ankilany, rehefa natolotra ny AirPods dia maro ny olona nitsikera ny habeny ary ho fihinanan-tafondro izy ireo noho ny fatiantoka. Io lafiny io dia nahatonga ireo mpanamboatra fitaovana maro hanomboka hamolavola tarika elastika hahafahana miditra ao amin'ny AirPod iray miaraka aorian'izay misy tarika iray.
Androany izahay dia nahita safidy vaovao izay ahatontosan'ny AirPods miorim-paka tsara amin'ny sofinao satria manodidina ny sofina izy ary napetraka ao aminy sy ny fomba marina noforonin'i Apple hampiasana azy. Midika izany fa tsy mila mitazona ny hatoka isika ny fikosehana ny tarika elastika toy ny amin'ny tranga hafa ary raha mihazakazaka isika dia mety hanjary tsy mahazo aina.
Araka ny hitanao, ny endriny dia tena ergonomika ary mifanaraka tanteraka amin'ny sofina araka ny ahitanao ny sary lohatenin'ity lahatsoratra ity. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity lahatsoratra ity ianao dia afaka manao izany tsidiho ity rohy manaraka ity izay ahazoanao azy 3,24 euros. Raha tsy misy fisalasalana, safidy iray hafa ny mandinika raha efa manana AirPods ianao ary mampiasa azy ireo amin'ny fanatanjahan-tena tafahoatra na mihazakazaka betsaka miaraka aminy ary tsy te hijaly fatiantoka na fianjerana amin'izy ireo.
Ataovy ao an-tsaina fa Apple dia miasa amin'ny kinova vaovao an'ny AirPods izay ahafahana mamerina amin'ny alàlan'ny fampidirana andriamby, ny teknolojia navoakan'i Apple tamin'ny iPhone farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Hatsarao ny fifamatoran'ny AirPods amin'ny sofinao amin'ity fitaovana ity